Maraykanka oo canbaareeyey qaraxii Hotel Central Muqdisho - Wargane News
Home Somali News Maraykanka oo canbaareeyey qaraxii Hotel Central Muqdisho
rgayga Dalka Maraykanka u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James P. McAnulty ayaa si adag u canbaareeyey qaraxii maanta oo Jicme ah ka dhacay Hotel Central magaalada Muqdisho, waxaana uu ku tilmaamey mid “Wuxuushinmo ah”. James P. McAnulty ayaa sheegay in uu tacsi u dirayo dadka helekooda lagu diley weerarka, waxaana uu caafimaad u rajeeyey kuwa ku dhaawacmey.
James P. McAnulty ayaa sheegay in dalka Maraykanku uu waqtigan adag la safan yahay dadka Soomaaliyeed iyo Dowladooda.
“Weearkan waxa uu calaamad u yahay sida al-Shabaab ay khatar ugu tahay dhamaan dadka Soomaaliyeed” ayuu yiri ergaygu.
Dhanka kale Ergayga ayaa xaqiijiyey in dalka maraykanku uu halkiisi ka sii wadayo wada shaqeynta dhaw ee uu la lee yahay madaxda Soomaalida, Ciidanka Xooga Dalka Soomaaliya iyo kan Midowga Afrika ka socda ee AMISOM, si loo jebiyo al-Shabaab.
Cajiib: Ma Dhaba Inu Iman Doono Madaxweyne Farmaajo Gobalada Bariga Somaliland Iyo Ujeedada Socdaalkiisa + Muuqaal